आज असार २१ गते चन्द्र ग्रहण, ज्योतिष भन्छन्, ‘यो भयंकर चन्द्रग्रहण हो’ कस्तो छ यस्को असर ? (भिडियो हेर्नुस्) – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/आज असार २१ गते चन्द्र ग्रहण, ज्योतिष भन्छन्, ‘यो भयंकर चन्द्रग्रहण हो’ कस्तो छ यस्को असर ? (भिडियो हेर्नुस्)
असार २१ गते आइतवार गुरुपुर्णीमाको दिन चन्द्रग्रहण लाग्ने भएको छ । यो चन्द्रग्रहण यो वर्षको दोस्रो चन्द्रग्रहण हो । गत असार ७ गते आइतबार औँसीको दिन सूर्यग्रहण लागेको अवस्था थियो। जसमा सूर्य, राहु र चन्द्रमा मिथुन राशीमा एउटै बिन्दुमा रहेका थिए। हाल चन्द्रमा विकसित हुँदै पुर्णिमा तिथि तर्फ उन्मुख भइरहेको छ।
यस्तोमा आउँदो पुर्णिमाको दिन चन्द्रमा केतु हुदै अघि बढ्ने छ। यसै सिलसिलामा असार २१ गते नेपाली समयअनुसार बिहान पख चन्द्र ग्रहण लाग्ने छ। शुत्रको अनुसार यो एक उपच्छाया चन्द्र ग्रहण हुनेछ । र बिहान पख भएकाले नेपाल, भारत लगायतका देशहरूमा ग्रहणको दृश्य देख्न सकिनेछैन। तसर्थ यस ग्रहणको कुनै सुतक काल भने मान्ने हुने छैन। यसमा कुनै पनि प्रकारको शुभ कार्य वर्जित हुने छैन। पूजा पाठ र भोजन देखि जोडिएका कार्य निर्वाध रुपमा गर्न सकिनेछ।
६ वटा ग्रह वक्री अवस्थामा रहेकाले यसलाई भयंकर चन्द्रग्रहण पनि भनिएको ज्योतिष विशाल आचार्यले बताएका छन् । चन्द्रग्रहणले प्रभाव पार्नेछन् । लाखौंको धनसम्पत्ती प्राप्त हुने र धनले मालामाल हुने राशी ४ वटा रहेको ज्योतिषले बताएका छन् । ति चार राशि मिथुन, कन्या, मिन र वृश्चिक राशि हुन् । जुन देशमा यो वर्षको चन्द्रग्रहण देखिन्छ ति देशमा नराम्रो असर पर्ने पनि ज्योतिषले बताएका छन् । प्राकृतिक विपत्ती आउने सम्भावना समेत रहेको उनको भनाई छ । भिडियो अन्तिममा रखिएको छ !
यो अर्को समाचार, हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । शनिबार देशभर सामान्य बदली रही सबै प्रदेशका धेरै जसो स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने भएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन निकालेर शुक्रबारदेखि मनसुन थप सक्रिय भएको अबको केही दिन मनसुनी गतिविधि बढ्ने जनाएको छ ।
मनसुन सक्रिय भएसँगै नदीहरुमा पानीको बहाव बढ्ने, भूक्षय हुने, पहिरो जाने, सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुने तथा ढल÷ पानीको राम्रो निकास नभएको ठाउँमा डुबानसमेत हुन सक्ने भएकाले महाशाखाले सतर्कता अपनाउन सबैमा अनुरोध गरिएको छ । हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश ५ का केही स्थानमा वर्षा भइरहेको छ ।
दिउँसो देशका सबै प्रदेशमा सामान्य बदली रही सबै प्रदेशका धेरै स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाका साथै प्रदेश १, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम २१ दशमलव शून्य डिग्री र अधिकतम तापक्रम २५ दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रहेको छ । आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम १७ दशमलव दुई डिग्री र सबैभन्दा बढी नेपालगञ्जको अधिकतम तापक्रम ३३ दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रहेको छ ।
आज असार २१ गते चन्द्र ग्रहण, ज्योतिष भन्छन्, ‘यो भयंकर चन्द्रग्रहण हो’ कस्तो छ यस्को असर